Nhengo dzeApple Inc. nhasi, mutengo weAAPL iri paIndaneti ikozvino, inowanidza mitengo yeApple Inc..
AAPL = 161.84 US dhora
-1.92 USD (-1.186%)
Ruzivo rwekushandurwa kwe Apple Inc. mu US dhora inovandudzwa kamwe pazuva. The stock quote stock mutengo ine avhareji kukosha pazuva. Mutengo wemasheya kubva kune zvakasimbiswa zvinyorwa. 1 stock of Apple Inc. ikozvino 161.84 stock of US dhora. Apple Inc. inodzikira. I Apple Inc. mwero wakadzikira kubva pa US dhora ne -117 mazana emakumi muzana muzana.
Apple Inc. inyanzvi yekambani inayo US dhora
Vhiki rapfuura, Apple Inc. inogona kutengeswa 160.24 US dhora. Mwedzi mitatu yadarika, Apple Inc. inogona kuchinjaniswa 154.30 US dhora. Makore matatu apfuura, Apple Inc. inogona kutengwa 176.69 US dhora. Apple Inc. mutengo wemasheya mu US dhora yakakodzera kuona pane chati. 1% pavhiki - shanduko mumutengo wemasheya we Apple Inc.. 32.9% pagore - shanduko mumutengo wemasheya we Apple Inc..
Stock quotes Apple Inc. US dhora
AAPL Kuti US dhora (USD)
1 AAPL 161.84 US dhora
5 AAPL 809.20 US dhora
10 AAPL 1 618.40 US dhora
25 AAPL 4 046 US dhora
50 AAPL 8 092 US dhora
100 AAPL 16 184 US dhora
250 AAPL 40 460 US dhora
500 AAPL 80 920 US dhora
Kana iwe uine 1 618.40 US dhora, ipapo mu British Virgin Islands vanogona kuchinjaniswa kwe 10 stock of Apple Inc.. Kana iwe uine 4 046 US dhora, saka mu British Virgin Islands unogona kutenga 25 stock ye Apple Inc.. Kana iwe uine 8 092 US dhora, ipapo mu British Virgin Islands vanogona kuchinjaniswa kwe 50 stock of Apple Inc.. Stock Quote converter izvozvi 100 stock of Apple Inc. inopa 16 184 US dhora. Kana iwe uine 40 460 US dhora, ipapo mu British Virgin Islands vanogona kutengeswa kwe 250 stock of Apple Inc.. Stock Quote converter nhasi ye 500 stock of Apple Inc. inopa 80 920 US dhora.
AAPL mutengo wemari yakaitika
Apple Inc. mu US dhora pa 3 Zvita 2021 - 161.84 US dhora. 2 Zvita 2021, 1 stock ye Apple Inc. = 163.76 US dhora. Apple Inc. mu US dhora pa 1 Zvita 2021 yakaenzana ne 164.77 US dhora. Iyo yakakwira AAPL / USD muyero wemwedzi wapfuura waive pa 30/11/2021. Apple Inc. mu US dhora pa 29 Mbudzi 2021 yakaenzana ne 160.24 US dhora.
Chimwe chikamu cheApple Inc. nhasi chinomira pa 161.84 $. Mutengo weAAPL wehove washanduka kusvika -1.186% kana -1.92 USD kubvira musi wekupedzisira wekutengesa. Iwe unogona kutenga zvikamu zana zveApple Inc. zve 16 184 US dhora kana kutengesa 50 mazana eAAPL ye 8 092 US dhora.
Apple Inc inogadzira, inogadzira uye inotengesa mafoni ekukurukurirana uye zvigadzirwa zvemhizha uye makombiyuta ega, uye inotengesa zvakasiyana-siyana zvepurogiramu yepurogiramu, maitirwo, zvigadzirwa, mitambo yekugadzirisa uye yezvakagadzirwa zvemadhigiriji yepamusoro uye maitiro.